Warshadda Dharka Dharka | Shiinaha Soosaarayaasha Bacda Dharka, shirkado cusub
Shiinaha soosaarayaasha boorsada dharka aan tolmo wanaagsan lahayn bacda ilaaliyaha oo leh astaan
Tayada qiimaha leh ee laga sameeyay maaddada polypropylene-ka-aan-tolnayn, 100% Eco-Friendly & Recyclable
Ku habboon kaydinta ama abaabulka maqaarrada, dhogorta, dharka, dharka, iyo dharka.
Wax neefta leh iyo aashito la'aan muddo dheer kaydinta - wuxuu ka ilaaliyaa caaryada
Bacda dharka ee boorsada dharka ninkeeda bacda daboolan, bacda dharka lagu laaban karo ee loogu talagalay suudka
Waxyaabaha: Ka sameysan maaddooyinka dharka aan tolmo lahayn, oo ku habboon keydinta iyo raadinta. Cabbirka: La habeeyay (L * W * H)
Dharka ayuu ka ilaaliyaa: Dharka ayuu ka ilaaliyaa wasakhda, siigada, iyo aboorka, wuxuu nadiifiyaa dharka.
Naqshadeynta jiinyeer: Isticmaal jiinyeer dhaadheer, si sahal ah u soo qaado, oo dharka dhig. Portable: Awood ballaaran, mid wax ku ool ah, daryeel wanaagsan u leh dharka.
qiimaha warshad MAYA MOQ bacda dharka leh ee jeebabka, bacda dharka arooska ee loogu talagalay boorsada dharka
Bacda Dharka Dharka dhaadheer: Boorsooyinkan dharka ah ee dharka dhaadheer waxay ka samaysan yihiin dhar tayo sare leh oo neefsanaya oo aan lahayn aashito 100GSM. Ka ilaali dharkaaga sida aboorka iyo boodhka, Dharka ha ku neefsadaan oo ha ku nadiifiyaan shandada, khaanadaha dharka, ama armaajooyinka
Daaqad Cad: Daaqadda cad waxay baabi'ineysaa mala awaalkii la isku dayayay in lagu ogaado waxa ku jira boorsada dharkaaga ee 60-inji ah Kaarka Aqoonsiga PVC caaga ah ee boorsada dharka loogu talagalay magaca sumadda ama kaarka aqoonsiga. Ku habboon iyo waqti-badbaadin.
Boorsada dharka suufka ah ee dharka leh calaamadda
1. Maro Cudurka Cudbiga Cudurka Cudurka Caafimaadka
2. Kaydinta moodada ah
3. Bar lagu dhaqi karo
4. Kaydinta aan boodhka lahayn
5. Jiinyeer adag